कुश्मा देखि पोखरा सुरुङमार्ग : सम्बृद्धिको सुरुङ – Parbat News
कुश्मा देखि पोखरा सुरुङमार्ग : सम्बृद्धिको सुरुङ
पञ्चासे सुरुङमार्ग नेपालकै सम्मृद्धिको सुरुङ बन्ने प्रशस्त आधार छन् । उत्तरी नाका कोरालादेखि दक्षिणी नाका त्रिवेणीसम्म जोडिने निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोर बेनी, बाग्लुङ, कुस्मा, फलेवास हुँदै जान्छ । पोखरा हुँदै जाने मध्यपहाडी लोकमार्ग कालीगण्डकी करिडोरसँग कुस्मामा जोडिन्छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ र प्रादेशिक राजधानी पोखरालाई चीनसँगको सीमा नाका कोरला र भारतसँगको सीमा नाका त्रिवेणीसँग जोड्ने एक सहज मार्ग पञ्चासे सुरुङमार्ग हुनेछ । यो मार्ग भविष्यमा महŒवपूर्ण अन्तरदेशीय व्यापारिक मार्ग हुने पक्का छ । भविष्यमा केरुङ–काठामाडौँ–पोखरा रेलमार्ग निर्माण भएमा राजधानीलाई कोराला र त्रिवेणीसँग जोड्न झनै सहज हुनेछ । प्रदेश नं. ४ को विकासको पहिलो आधार पर्यटनलाई मानिएको छ । कालीगण्डकी र मोदीखोला उपत्यकामा अन्नपूर्ण बेसक्याम्प, पुनहील, घोरेपानी, तातोपानी, पञ्चासे, जोमसोम, मुक्तिनाथ, मुस्ताङ र राउण्ड अन्नपूर्ण ट्रेक जस्ता महŒवपूर्ण पर्यटकीय स्थल छन् ।
कालीगण्डकीमा ¥याफ्टिङ, अग्ला झोलुङ्गे पुल तथा बञ्जीजम्पजस्ता पूर्वाधारले पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । सङ्घीय सरकारले यसै वर्ष विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन कालिगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । यो परियोजनाको बाँध निर्माण भएपछि कालीगण्डकी र मोदीखोलामा कृत्रिम जलाशय बन्ने छ, जुन पर्वत जिल्लाको दक्षिणी भेगदेखि मोदी खोलाको दोविल्ला र कालीगण्डकीको मालढुङ्गासम्म फैलिने सम्भावना छ । यसले जल पर्यटन तथा यातायातमा फड्को मार्नेछ । यो जलाशयले पर्वतको दक्षिणी भेग, गुल्मीको उत्तरी भेग, बागलुङ, म्याग्दी तथा मुस्ताङसँगको सम्पर्क तथा यातायातलाई सहज बनाउने छ । यस जलाशय हँुंदै पानीजहाज÷मोटरबोटबाट दोविल्ला र त्यहाँबाट पञ्चासे सुरुङमार्ग हुँदै पोखरा आउन लाग्ने समय अहिलेकोभन्दा एकतिहाइमा झर्नेछ । पर्यटनका विविध सम्भावनाका कारण धौलागिरि अञ्चल पोखरापछिको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना छ । यस पृष्ठभूमिमा पोखराबाट छिटो र सुविधायुक्त तरिकाले धौलागिरि भित्रिने विकल्प पञ्चासेको सुरुङ मार्गले दिनेछ ।
भौगोलिक, भौगर्भिक, प्राविधिक र आर्थिक सबै हिसाबले पञ्चासेमुनिबाट सुरुङमार्ग निर्माण नै प्रदेश ४ को पूर्वी र पश्चिमी भेगलाई सरल, सहज, छिटो र सस्तो किसिमले जोड्ने मार्ग बन्न सक्ने देखिन्छ । यस सुरुङमार्गले प्रदेश ४ मात्र नभई समग्र नेपालकै विकासमा बहुआयामिक प्रभाव पार्नेछ र यो नेपालकै सम्मृद्धिको सुरुङ बन्ने पक्का छ । तसर्थ, सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पारी यस वर्ष नै सम्भाव्यता अध्ययन थालनी गर्नुपर्छ ।
प्रा. डा. लालु पौडेल : गोरखापत्रबाट साभार गरिएको